Iimpawu ze-5.8 kwimida yezinto - i-Geofumed
Iimpawu ze-5.8 kwiiperimeters zezinto
Ngoku masibuyele esihlokweni esasiqale ngalo isahluko. Njengoko uya kukhumbuza, senza amaphupha ngokucacisa ukulungelelanisa kwabo kwesikrini. Siphinde sichaze ukuba ngomyalelo we-DDPTYPE sinokukhetha ukhetho lwendlela eyahlukileyo. Ngoku ke sijonge ezinye iindlela ezimbini zokudala iipowuni kwiimitha zezinye izinto. Ezi ngongoma zisoloko zi luncedo njengemibonakalo yokudala eminye imidwebo.
Umyalelo we-DIVIDE udala amaphuzu kwi-perimeter yesinye into kwixesha elide kangangokuba lihlula kwinani elibonisiweyo lamalungu. Ngenxalenye yayo, umyalelo we-GRADUA ubeka iingongoma kwi-perimeter yezinto kwixesha elichazwe ngumgama obanjwe.
Post edlulileyo«Edlulileyo 5.7 Polygons
Post Next ISAHLUKO 6: IINJONGO ZESICWANGCISOOkulandelayo "